Puntland Oo Gacanta Ku Dhigtay Burcad Dhaawac Iyo Dhac Geysatay – Banaadir Times
By banaadir 3rd April 2021 57 No comment
Ciidamada Booliska Gobalka Bari ee Maamulka Puntland ayaa ku guuleystay inay gacanta kusoo dhigaan rag burcad ah oo dhaawac iyo dhac qof shacab ah ugu geystay Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolkaas.
Ciidamada Booliska Maamulka ayaa howlgalo kala duwan ka sameeyay duleedka Boosaaso, iyagoona kusoo qabtay rag Nin oo dhacay gaari nooca raaxad ah ee looyaqaan (Probox) oo ka shaqeeyaa halkaas.
Taliyaha qeybta Booliska Gobalka Bari G/Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa sheegay in Ciidanka Booliska ay ku guuleysteen soo qabashada gaariga la dhacay oo ka diiwaan-gashay dowladda hoose ee Boosaaso.
Taliye Xuseen Cali ayaa tilmaamay ragga lasoo qabtay ay ku socdaan baaritaano isla markaana ay xiran yihiin, waxaana goobta Gaariga ay ku soo bandhigayeen Booliska goob joog ka ahaa Saraakiil ka tirsan Booliska.
Taliyaha Booliska Gobalka Bari G/Sare Xuseen Cali ayaa waxaa uu hoosta ka xariiqay in aan qof shacab lagu xadgudbi karin hantidiisa, wuxuuna digniin u diray burcada, isagoona caddeeyay in cid kasta oo isku dayda falkaas tallaabo laga qaadi doono.
Wararka Maxay ka wada hadleen Madaxweynaha Puntland iyo Safiirka Turkiga?